Home News Wararkii Ugu Dambeeyay Banaanbaxyo xoogan oo wali ka socda Baydhabo!!
Wararkii Ugu Dambeeyay Banaanbaxyo xoogan oo wali ka socda Baydhabo!!
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in wali halkaasi ay ka socdaan rabshaddo looga soo horjeedo xarigii Musharax Mukhtaar Roobow Cali.
Dadka ayaa wali wadda Banaanbaxyo ay ku dalbanayaan in la sii daayo Sheekh Mukhtaar Roobow oo shalay dowladda Soomaaliya ay kasoo xirtay Magaalada Baydhabo.
Previous articleGudoomiyaha Gudigga Doorashooyinka K/Galbeed oo iscasilay!!
Next articleCabdulqaadir Shariif Sheekhuna:- oo digniin u diray Shacabka Magaalada Baydhabo!!